Lalana Tsarasaotra Ivato Tsy azo ekena ny gaboraraka, hoy ny fanjakana
Manomboka ny alarobia ho avy izao dia hipetraka ny fandaminana vaovao eo amin’ny lalana mampitohy an’i Tsarasaotra sy Ivato .
10 taona nisian’ny SAMIFIN Nahatratra 161 ireo tranga nisiana famotsiam-bola
Nandritra ny 10 taona nitsanganan’ny Sampandraharaha iadiana amin'ny famontsim-bola sy famatsiam-bola amin'ny fampihorohoroana (SAMIFIN) izay dia tafakatra 161 ireo tranga naharaisany fitarainana tamin’ny taona 2018 raha toa ka 151 ny taona 2017.
Fampandrosoana an’i Madagasikara Tsy voatery hiandry ny fitondram-panjakana
Tompon’andraikitra ny tsirairay amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, hoy ny orinasa Etech izay mbola anatin’ny fankalazana ny faha-10 taonany hatrany.
Anisan’izany ny tetikasa nasionaly momba ny fanamarinana ny taratasin-tany izay nanomezan’ny Banky Iraisam-pirenena 52 tapitrisa dolara hampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fisitrahan’ny tokantrano sy ny orinasa ary ny ivontoeram-pitsaboana hahazo jiro ka nanomezan’izy ireo 150 tapitrisa dolara. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fanomezan’ny Banky iraisam-pirenena 90 tapitrisa dolara hanamafisana ireo tetikasa nasionaly amin’ny fiahiana ara-tsosialy izay tena mbola marefo eto Madagasikara. Nanambara Ramatoa Coralie Gevers misolotena ny Banky iraisam-pirenena fa zava-dehibe ary tena ilaina ny fanampiana an’i Madagasikara, indrindra amin’ny sehatra fambolena satria io no ifotoran’ny toekarena Malagasy. Miankina amin’io sehatra io mihitsy hoy izy ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Fifanarahana tantanan’ny fanjakana Malagasy moa ity natao omaly ity araka ny tatitry ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola, Richard Randriamandranto ka ilana fahaiza-mitantana. Saika voakasik’ity fifanaovan-tsonia ity avokoa ny sehatra fambolena, ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny angovo ary ny toekarena sy ny fitantanam-bola.